Iyo Yemagariro Midhiya Inodzoka PaInvestment Iwe Hausi Kuyera | Martech Zone
Iyo Yemagariro Midhiya Inodzoka PaInvestment Iwe Hausi Kuyera
Chipiri, August 26, 2014 Chipiri, August 26, 2014 Douglas Karr
Chokwadi chinotaurirwa, mazhinji emakambani andakashanda nawo ave nematambudziko ekutevera uye kuyera dzoka pakudyara kana zvasvika pasocial media. Pane nzira dzinoverengeka dzekuburitsa kukosha pasocial media kuedza kwesangano rako:
Ndeipi iyo vhoriyamu yetraffic kubhizinesi rako ingakudhara iwe muPay Per Click? - Sezvo mazwi akakosha uye mutengo wemubhadharo pasiti wakatsikiswa, unogona kufananidza mazwi ako makuru mu analytics kumitengo yemubhadharo pakutsvaga chete mazwi akafanana. Wedzera huwandu uye iwe unowanzo kuve nenyaya yakanaka kwazvo yekuudza sangano rako nemari yakawanda yawakachengeta kambani.
Yakawanda sei yekutengesa vhoriyamu iwe yaunogona kunongedzera zvakananga kune vezvenhau? - Kuchengeta kwakananga kutengesa kubva kune vezvenhau masosi inzira yemoto yekuratidzira kudzoka mukudyara Inosanganisirwa mune izvi, chokwadika, ndeinjini dzekutsvaga - idzo dzinowanzo tyaira huwandu hwakawanda hwe traffic kune yako kambani kuburikidza nevezvenhau.
Vazhinji kushambadzira pamhepo uye vezvenhau vezvematongerwo enyika vanoona padyo. Iko kukanganisa kwekudzoka mukudyara kwakapfuura izvo zvakananga kudzvanya. Imwe ye David Armano's madhayagiramu kubva makore apfuura imwe yandinoramba ndichigovana:
The ancillary kudzoka mukudyara haina nyore kuyera, asi iripo. Meseji yangu nevatengi ndeyekuti isu tinogona kutanga nekuyera kudzoka kwekudyara nenzira mbiri dzekutanga - asi pachave nedzimwe nzira dzakawanda idzo kambani yako ichaona kudzoka pane yayo investa munhau midhiya.
Kuva mutungamiri anofunga muindasitiri yako - kana iwe usingafunge kuti kutengesa kunogona kubva mukungotora zita rako kunze muindasitiri, warasika. Kiyi yemagariro enhau iri kuwedzera hunhu hwevanhu kuchiratidzo nekuti inovaka kuvimba. Kuvimba ndiko kiyi kune bhizinesi 'kubudirira. Paunenge iwe watanga kutora chikamu munzanga midhiya zvinoshingairira, iwe unowanzo kukokwa kuti utaure kumabhizimusi uye kumisangano yemudiwa, zviitiko, webinars, nezvimwe.
Kuvaka Hukama hweMunhu neVatengi vako - zvakaoma kusiya vanhu vatinokura tichifarira. Vanhu dzimwe nguva iglue yaunoda muhukama hwebhizinesi kuchengetedza vatengi. Haisi ese echokwadi uye manhamba, kazhinji kacho izvo zvishoma zvishoma zvinowedzerwa nevanhu. Ndivashandi vanoita mutsauko uye vezvenhau vanobvumidza iwe kuona kuseri kwechiratidzo uye kubatana wega nevanhu vari mubhizinesi.
Shoko reMuromo kushambadzira - yakaratidzirwa kuve imwe yeanoshanda nzira yekushambadzira bhizinesi, asi hachisi chinhu chinogona kugadzirwa zvakagadzirwa (vazhinji vanoedza). Mukukurukurirana kwemasocial media, ndinokurudzira makambani, zvigadzirwa nemasevhisi pese pandinogona. Izvi zvinowanzo kuve maitiro pane netiweki - kumbira rubatsiro kana kusimudzira sevhisi uye vanhu vanoparadzira izwi!
Kuvaka Mukurumbira - Mukurumbira ndezvese zviri online, uye kugadzira mukurumbira wakanaka pane yako saiti, mune ako masocial network, uye munzvimbo dzevatengi vako '' uye masocial network ndiyo hwaro hwekuvimba huchaunza bhizinesi. Kuvimba ndiko kwakakosha mune chero bhizinesi kutengeserana, uye zviri nyore kukunda nyaya dzekuvimba nekubatana pachako nevanhu vari kuseri kwechiratidzo.
Chiremera Chekuvaka - pamwe nekuvaka mukurumbira, iwe zvakare unovaka nhoroondo neinjini dzekutsvaga dzinoyerwa zvese mune zvinyorwa uye backlinks. Iyo mukurumbira unoenderera, unoenderana nenyaya dzakananga uye nemazwi akakosha, ichaenderera ichikurudzira zvirimo zvaunogovana uye nemasaiti iwe aunonyora pamusoro pekutsvaga kweinjini dzekutsvaga. Kutsvaga chinhu chikuru sosi yepamhepo kushambadzira kudzoka pane investment. Usanyengerwe - yako yemagariro midhiya yekubudirira hunhu zvakanyanya kune icho chiremera chauri kuvaka neinjini dzekutsvaga.
Sakananga Sales - Vanhu vazhinji vanotsvaga pawebhu vanoverenga, vosiya, verenga, siya, verenga, siya, vobva vadzoka voita. Kana kuverenga kwacho kukaitwa pane blog asi kutendeuka kunoitika pane yako ecommerce saiti kana yemubatanidzwa saiti, dzimwe nguva hazvigoneke newebhu analytics kuratidza kushanya kwakananga kune vezvenhau. Chokwadi chiripo ndechekuti vazhinji vedu takabatana nevezvenhau asi iwe waita bhizinesi neni zvakananga usingataure blog rangu ... asi raivapo uye rakakanganisa.
Sevhisi Mari Yekuchengetedza - Kana vatengi vako vachiverenga mablog ako, iwe unogona kuve nemhedzisiro yakakosha muhuwandu hwebasa uye account manejimendi mitengo nekuvadzidzisa online. Zvemagariro midhiya zvinowanzo kuve imwe-kune-yakawanda yepakati. Panzvimbo pekunyora email uchipindura mutengi, iwe ungadai wakazvinyora online wozviisa kunze kwevanhu vazhinji. Zvakaoma kuyera basa rawaisafanirwa kuita - asi zviripo!
Zvemukati uye Kutumira Meseji - zuva rega rega kambani yako inotora chikamu munhau dzezvemagariro izuva revashandi vako vachidzidzira, vachidzidzira kugadzira meseji yako, uye vachizvizivisa. Kunyanya ini taura, bvunza, uye blog nezve social media uye zvazvinoita pamabhizinesi, zviri nyore kwandiri kuti ndibatsire tarisiro nyowani nevatengi vanzwisise maitiro ekuishandisa. Ndiri kutora chikamu munhaurwa, ndichiverenga zviri kutaurwa nedzimwe nyanzvi, ndichiona zvakabudirira uye zvakundikana, uye ndichikwanisa kuzviisa kune vatengi vangu. Pane kukosha kusinganzwisisike mune izvi asi zvakaoma kuyera iyo ROI.
Kurudzira Investment Yako muSocial Media
Iyo yakasarudzika yekunangisa mikana uye yakaderera mutengo pakadzvanya pasocial media kushambadzira inoita iyo yakasarudzika yekusimudzira yepakati iyo iwe yaunofanirwa kunge uchinyatso kushandisa mukana. Kana iwe uri kuisa nguva mukuvaka inhau yemagariro vateereri kana nharaunda, saka nei usingadi kuwedzeredza pane yako investa uye nekuona kuti iri kusvika kune vanhu vazhinji mukati akakosha akakosha manetwork? Pasina kutaura nezve iyo Facebook uye mamwe mapuratifomu ari kupa zvirinani kwazvo kuiswa kune akabhadharwa kusimudzira pamusoro pe organic!
Hazvisi ZVESE kana HAPANA.
Dzimwe nyanzvi mukati memagariro enhau havazivi kukosha kwemamwe masocial media uye masocial network senge Twitter, LinkedIn, Facebook, nezvimwe. Ivo vanotenda kuti iwe unofanirwa kushandisa nguva yako yese kuita chinhu chimwe. or chimwe chacho. Ivo vanofarira kuenzanisa mapuratifomu uye marongero ekunongedzera kuchirongwa chavo se chete chete kushandisa zvose zviwanikwa zvako uye zvaunofanira kushandisa hapana pane vamwe.
Izvo zvandakaona mumasocial media ndiko kushandiswa kunoshanda kwechero svikiro kusimudzira masimba ayo uye kudzivirira kushaya simba kwayo. Twitter inzira huru yekusvikira vanhu vazhinji vasina kushingirira…. asi haisi nzira inoshanda yemisoro (senge ino posvo) inoda tsananguro yakadzama yemusoro wenyaya. Yangu blog iri yepakati svikiro yetsananguro yakadzama. Saka - mumaminetsi mashoma tweet ichazotumirwa otomatiki, kuburikidza Hootsuite kune vanopfuura makumi masere ezviuru zvevateveri vangu vega uye vehunyanzvi… vachitungamira vashanyi vazhinji kudzokera kublog rangu, vamwe kugovana posvo, uye kudzoka kwekudyara kuchave kwakanaka.
Tags: pasocial media kupiwapasocial media vatengimagariro enhau anodzoka mukudyarapasocial media roipasocial media kutengesasocial media traffic mutengo
Ko Bhizinesi Rako rinoteedzera Yemagariro Media Etiquette Akanaka Maitiro?
Gonesa Yako Webinar Kushandisa: Webinar ROI Calculator
Jun 7, 2009 pa9: 43AM
Akanaka pfungwa pane yakananga uye isina kunangana ROI yemagariro enhau.
Zvemagariro midhiya musanganiswa wezvirango kubva kuBranding kuenda kuPR kusvika Kushambadzira. Kushambadzira uye PR kuri nezve zvisina kunangana ROI nepo Kushambadzira kuri nezve yakananga ROI.
Asi kana zvese izvi zviitwa zvikaiswa mune imwechete fomu senge pasocial media, makambani anozofanirwa kutanga atsanangura zvavari kushandisa pasocial media, vasati vafunga kuti ndeipi ROI inoenderana.